मोवाइल : ‘डिजिटल ड्रग’! | mulkhabar.com
August 21, 2018 | 9:55 am 293 Hits
तपाईंका साना बालबच्चा छन् ? बालबच्चाको हेरचाह कसरी गर्नुहुन्छ? आफ्नो व्यस्त दैनिकीसँग जुँध्दै गर्दा तपाईंले आफ्ना नानीबाबुको रेखदेखका लागि मोबाइलको प्रयोग बढी प्रयोग त गर्नुभएको छैन्?
अहिले बालबालिकाहरु मोबाइल बिना कुनै काम नगर्ने भन्दै अड्डी कस्ने गर्दछन् । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु सबै अभिभावकको काम हो । हुन पनि मोबाइलमा उनीहरुले मनपराउने कार्टुन मन लगाएर हेर्छन । साना बालबालिकालाई नै लक्षित गरेर ‘चुचु’ अनलाइन टिभी पनि सञ्चालनमा छ । यसको लत बालबालिकाका लागि सबैभन्दा खतरनाक बनेको बालचिकित्सकहरुको भनाई छ ।
बालबालिकाको मोवाइल मोहलाई डिजिटल ड्रगको रूपमा पनि व्याख्या गरिएको पाइन्छ । मोबाइल फोनको शिकार स–साना २/३ वर्षमा नानी–बाबुदेखि स्कुल जाने बालबालिका ग्रसित पारेको छ। अझ कक्षा ९ देखि १२ सम्मकाहरूका लागि त खानपिउन कै साटो मोबाइल चाहिन्छ ।
मोबाइलमा गेम तथा फोटो उपलोड उनीहरूको ध्येय हुन्छ। यस वर्गको हातमा मोबाइल त हुन्छ तर, यसको सही प्रयोगको भने ज्ञान हुदैन। ‘भर्चुअल’ रूपमा नजिकिए पनि मानिससँगको सामिप्गतालाई घटाएको छ।
हालसम्म, मोबाइल कै कारण हत्या, आत्महत्यालगायतका घटना र साइबर क्राइमका घटना धेरै सुन्ने गरिन्छ । यो असर साना बालबालिकमा पनि पर्नेगर्दछ भन्ने सन्देश दिने घटना घटेको छ भारतकोभोपालमा ।
कक्षा नौ मा अध्ययनरत : १४ वर्षिया एक किशोरीले आत्म–हत्या गरेकी छन्। उनले मोबाइलमा धेरै समयसम्म गेम खेलेकोमा आमाबाट गाली खाएकी थिइन् ।
गाली पछि उनीले आमालाई घुर्कयाउँदै फाँसी लगाउने धम्म्याएमी थिइन् । उनी कोठा थुनेर फाँसी लगाएकी थिइन् ।
आमाबाबु दुवैले घुक्र्याएको मान्दै हेक्का राखेन् ‘हामीले बच्चा हो यतिकै घुक्र्याएकी होलिन् भन्ठान्यौँ, यस्तो होला भन्ने सोच नै भएन ।
केही समय अघि २२ जुलाईमा मात्र उनको १४ औँ जन्म दिन मनाएको थियो। मृतक किशोरीका मातापिताले, उनीहरूको बच्चाहरूलाई आफ्नो सिमामा राखेर मात्र मोबाइल चलाउन दिनु पर्ने र सही र गलत छुट्याउन सिकाउन अपिल गरेका छन्।